Mobile APPeal - Kuongorora iyo Landscape Landscape | Martech Zone
Chitatu, Kurume 20, 2013 Adam Mudiki
Mamwe mapurogiramu eApplephone pane vacheche? Chimwe chinhu nezvazvo chinoratidzika kunge chinotyisa… uye chinotyisa panguva imwe chete. Mukuongorora mamiriro ezvekushandisa, zvinoita kunge paine toni yemitambo, asi zvigadzirwa zvebhizinesi zviri kusarira kumashure. Ndine chokwadi chekuti uchaona idzi nhamba dzichiswederana padhuze mune ramangwana, zvakadaro, sezvo makambani mazhinji uye mazhinji emabhizinesi anotora nzira dzekufambisa sechikamu chezuva nezuva bhizinesi.
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti mafoni emafoni uye zvimwe nhare mbozha zvasvika padanho rekuti ubiquitousness. Isu tinovashandisa mazuva ese, kune chese chinhu kubva pakugadzira hotera, kutarisa kumaakaundi edu emabhangi, kuodha pizza nezvimwe. Uye neanopfuura mamirioni 1.5 maapplication anowanikwa muApple App Store neGoogle Play, vatengi vane huwandu husingagumi hwesarudzo dzaunosarudza kubva. Kubva kuNew Relic infographic, Nhare mbozha Kutsvaga: Nei iro Ramangwana riri Nhare.
Tags: infographicMobile AnwendungnharembozhaNew Relic